Rose of Sharon: ပညာရေးကုန်ဈေးနှုန်း
Posted by rose of sharon at 6:51 AM
မမနော်ရယ် ဖတ်ပီး အတော်မောသွားတယ် အဲ့လောက်တောင် ဈေးကြီးတယ်လား မိဘတွေကို သနားမိတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမနော်ရယ် ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ဆိုတော့ မမနော် ဈေးဝယ်တာတွေလျှော့နော် :P
san htun January 19, 2012 at 10:54 AM
ပညာကို ရွှေအိုးနဲ့ဝယ်ရတာ ဆိုတာ အမှန်ပဲ အမရေ..စန်းထွန်းလည်း ဖေ၊မေ၊မကြီးက ကျောင်းစရိတ် ထောက်လိုက်၊ အလုပ်ရလို့ပြန်ဆပ်တာ မကျေသေးခင် နောက်ထပ် ကျောင်းထပ်ဖို့ထပ်ထွက်လာရော..မိဘတွေ ခမျာလည်း သားသမီးတွေ ကျောင်းစရိတ်ကို တွေးရတာနဲ့ခေါင်းခြောက်တယ်..ကိုယ်ချင်းစာတယ် အမရေ..
An Asian Tour Operator January 19, 2012 at 12:52 PM
mstint January 19, 2012 at 2:30 PM
မြသွေးနီ January 19, 2012 at 5:54 PM
ပညာကို ၀ယ်ယူရတဲ့ စံနစ်ဆိုးတွေ ပပျောက်စေချင်လှတယ်...။
ဒီမှာလည်း အလားတူပါဘဲ ညီမရေ...။
ညီရဲသစ် January 20, 2012 at 9:16 AM
ညီရဲသစ် January 20, 2012 at 9:19 AM
ကျောင်းလခတွေ ဈေးတက်တာက ဟိုကကြားရ ဒီကကြားရနဲ့ တကမ္ဘာလုံးများ ဖြစ်နေမလားဘဲ။ ဒေါ်လာ နှစ်သောင်းခွဲဆိုတော့ အစ်မတို့ တော့ တော်တော်လေး နင့်သွားမယ်နဲ့ တူတယ်နော်... ဒီခောတ်က ပညာကို ငွေနဲ့ ဝယ်ယူနေရတာနဲ့ တူနေပါပြီလေ...
နေ၀သန် January 20, 2012 at 8:59 AM
အင်း... မိဘနေရာရောက်လာတော့လည်း မလွယ်ပါလားနော်..... ဗီယက်နမ်ဆိုတော့လည်း part time job ကအဆင်မပြေလောက်ဘူးထင်တယ်နော်.. သိတော့မသိဘူး... အဟဲ.. အကြံပေးမယ်... အစ်ကိုနဲ့အစ်မတို့ သေချာတိုင်ပင်ဗျာ. ဟီးဟီး... (ပျော်အောင်နောက်သွားတယ်.. )
Shinlay January 20, 2012 at 9:56 PM
မလွယ်ပါလားနော်။ သူတို့ ရှေ့ရေးအတွက်ဆိုတော့လည်း မိဘတိုင်းက အကောင်းဆုံးလုပ်ပေး
rose of sharon January 21, 2012 at 2:45 PM
မြစ်ကျိုးအင်း January 21, 2012 at 11:03 PM
ဖတ်ရတာ ရင်မောလိုက်တာ။ သားသမီးပညာရေးဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ့် မိဘတွေရဲ့ မေတ္တာကို ခံစားမိပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဖေဖေ လခထပ်တိုးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ လောလောဆယ် ဖြေရှင်းနည်းတော့ အဲဒါပဲ မြင်မိတယ်။ တခြားနောက်ထပ် ဈေးသက်သာမယ့် ကျောင်းတွေရှိသေးရင်တော့ ရွေးချယ်ခွင့်ပိုလာမှာပဲ။
(ကွန်မန့်ဘယ်နားရေးရမှန်း မတွေ့လို့ Reply ဆိုတာနှိပ်ပြီး ရေးလိုက်တယ်အစ်မရေ)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 22, 2012 at 1:32 AM
လျှော့တော့လျှော့ပါ မမရယ် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာလေးထဲကလို မနက်စာ ညစာထဲက တစ်နက်စာတော့ မလျှော့ပရစေနဲ့ ဆိုသလို....:):)
ညိမ်းနိုင် January 26, 2012 at 7:53 PM
ဘုရားရေ.......ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နှစ်ပညာသင်စားရိတ်က ၁၀၀၀၀ ဆိုတော့
HLAINGGYI March 16, 2012 at 11:22 PM
အကြံတော့ ပေးတက်ဖူး မမရေ ဒီလိုတွေ့ နေကြားနေရတာနဲ့ နော်တော့ ၃၀ ပြည့်တော့မယ်..တတ္တိ တွေရှိတော့ဘူး.ခိခိ..
rose of sharon May 15, 2012 at 2:50 PM
ဗီယက်နမ်ရောက်မြန်မာ March 24, 2012 at 11:43 PM
ခုမှ ဒီဘလော့ကိုတွေ့လို့ဖတ်ရင်း ...HCMC က ဆိုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီမှာ Phillippine Registered နဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါတယ်။ တော်တော်သက်သာပါတယ် သူ့ကလေးတွေလဲအဲဒီမှာဘဲထားတာသိရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ သူ့ကိုမေးပေးပါ့မယ်။
rose of sharon May 15, 2012 at 2:49 PM
ဒီဘလောက်ကို တွေ့တာတော့ကြာပြီ ဗီယက်နမ်အကြောင်းတခါဖတ်ပြီးတော့ ချောင်ထိုးထားလိုက်တယ်... အခုစိတ်ကူးပေါက်ပြီး ဘလောက်တွေ ဆိုက်တွေကို လိုက်လှန်ကြည့်ရင်း နဲနဲလေး ရေးချင်စိတ်ပေါက်သား..... ...မပူပါနဲ့အမရယ် ဆင်ပိန်တာကျွဲလောက်တော့ရှိပါတယ်....မြန်မာပြည်သားသန်း၇၀ရှိတာ အမတို့ကလေးတနှစ်စာကျောင်းလခလောက် တသက်စုမရတဲ့သူတွေ ၆၉သန်း၉သိန်းရှိပါတယ်...အားမငယ်ပါနဲ့ ကျနော်တို့လို မြန်မာပြည်သားတွေ ထမင်းကြမ်းနဲ့ပဲပြုတ်နှပ်မှန်အောင်မစားနိုင်တဲ့သူတွေ မနက်စာညစာပေါင်းပြီး ဆန်ပြုတ်သောက်တဲ့သူတွေအများကြီးဘဲ အမတို့အဲဒီအဆင့်မရောက်သေးပါဘူး...ကျနော်တို့လိုလူ ခိုငှက် ဖြစ်ဖို့လေးလဲထားစမ်းပါဦး...အော် လနဲ့စတဲ့လောကကြီးလဲ အခက်သား ဘနဲ့စတဲ့ဘဝ နှလုံးထဲနဲ့ရှူပ်နေပါပေါ့လား ရလေလိုနေအိုသစ္ဆေ.....
rose of sharon May 15, 2012 at 2:52 PM